KU SAABSAN US - Beijing Grip Pipe Technology Co., Ltd.
Isku Xidhida Tuuboyinka
Rakiban Tuubbo Kale
Shirkadda Beijing Grip Pipe Technologies Company Limited waxay ku taal Aagga Horumarinta Beijing (BDA), waxay billowday isku-xidhka dhuumaha iyo clamps R&D dabayaaqadii 1990-yadii waxayna billaabatay wax soo saarkii horraantii 2000. Xirmooyinkayaga shatiga, isku-kalsoonaanta iyo tayada sare leh iyo xirmooyinka ayaa caan ka ahaa warshadaha milatariga wax yar kadib waxay heleen shay-baarka. Alaabtayadu waxay si fiican u xalliyeen dhibaatooyinkooda farsamo. Tan iyo waagaas waxaan qabanay Beijing Grip waxaa naloo aqoonsaday inaan noqono shirkad loo magacaabay soosaarayaasha qalabka badda, dhismaha maraakiibta, saliida & gaaska ee Shiinaha in kabadan toban sano. Waxaan sii wadeynaa hormarinta iyo hagaajinta alaabadayada si aan ula kulanno macaamiisha dalabaadka isa soo taraya.
Waxyaabahayagu waxay ku qoran yihiin ISO9001-2008, CCS (Shiinaha Qoondaynta Bulshada), DNV.GL, BV, RMRS iyo wixii la mid ah, kuwaas oo xaqiijinaya tayada BJGRIP oo naga dhigaya soo saaraha biibiilaha No.1 ee Shiinaha. Waxaan helnaa aqoon isweydaarsi wax soo saar 2000 mitir oo laba jibbaaran, laba kooxood oo R&D ah iyo hal koox oo QC ah si loo hubiyo wax soo saar waqtiyaysan oo tayo leh.
Iyadoo ay weheliso horumarka iyo kobaca ganacsiga, waxaan balaarineynaa suuqyada dibada sanadkii 2012. Hadafkeenu waa inaan siino adeegsadeyaasha tayo sare leh oo qiimo jaban ku xirnaanta isticmaaleyaasha adduunka oo dhan!
Isku day inaad sameysid oo aad soo saartid alaabada mashiinada teknolojiyada casriga ah adoo adeegsanaya hal abuur farsamo
Samee alaab heer-koowaad ah si aad u dhisto sumcadda caalamiga ah ee 'Beijing Grip'.
Tayo-koowaad, kalsooni ku-saleysan, maamul u janjeedha, adeeg daacad ah.
Shirkadda Beijing Grip Pipe Technologies Company Limited waxay ku taal Aagga Horumarinta Beijing (BDA), waxay billowday isku-xidhka dhuumaha iyo clamps R&D dabayaaqadii 1990-yadii waxayna bilawday wax-soo-saarka horraantii 2000. Isku-xidhkayaga shatiga, kalsoonida leh oo tayo sare leh iyo qabqabashada ayaa caan ku ahaa kuwa ugu warshadaha badan xagga militariga…
Shirkadda: Beijing xajin tuuboyinka Technology Co., Ltd.
ku dar: 32 #, Jinghai Wadada 1aad, BDA, Beijing, Shiinaha.
Fakis: + 86-10-87398232